Tsy tafiditra amin’ny lahadiniky ny ONU : hitaky ireo Nosintsika any amin’ny fitsarana ny ANM | NewsMada
Tsy tafiditra amin’ny lahadiniky ny ONU : hitaky ireo Nosintsika any amin’ny fitsarana ny ANM
Par Taratra sur 22/09/2016
Handeha amin’ny dingana hafa. « Tsy avelanay raha tsy azontsika ireo Nosy manodidina ireo… Handeha lavidavitra kokoa ny fitakiana fa tsy hiandry ny fivorian’ny ONU amin’ny andiany faha-72 izany isika, ka hitory any amin’ny fitsarana iraisam-pirenena », hoy ny filohan’ny Fikambanana Nosy malagasy (ANM), Ramaroson Arlette omaly, tamin’ny haino aman-jery. Nambarany fa mandeha any amin’ny zo sy lalàna momba ny ranomasina ny resaka amin’izay fotoana izay, ka tsy maintsy hivaly eo no ho eo. « Tonga hatrany amin’ny hery ara-tafika izany raha ilaina », hoy ihany izy.
Nambarany fa efa nihemotra lava io fitakiana io sady tsy nanao ny ezaka hahazoana ireo Nosintsika ireo ny mpitondra nifanesy. « Efa fantatray fa tsy sahy hiresaka azy io ny mpitondra… Tsy novaliny ny fangatahanay ny mba hisian’ny delegasion’ny ANM hivory ao amin’ny vaomiera handinika izany eo anivon’ny ONU… Tsy nahazo alalana hiteny anefa izahay … », hoy ny filohan’ny ANM.
Mitaky fahatsapan-tena ny ANM
Etsy andaniny, nambarany fa tokony hifampitantana sy hahatsapa tena ny samy Malagasy. Na ny mpanohitra na ny mpitondra tokony hiady ireo Nosy ireo, araka ny nambarany.
Tsiahivina fa tsy tafiditra amin’ny lahadinika amin’ny fihaonana an-tampon’ny ONU tanterahina any New York amin’izao fotoana izao ny momba ireo Nosy manodidina ireo, araka ny tapaky ny mpivory ny herinandro teo. Tokony hodinihina amin’ny 3 oktobra izao anefa izany.